Madaxweynaha Uganda oo ku goodiyay in uu ciidamadiisa kala baxayo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Uganda oo ku goodiyay in uu ciidamadiisa kala baxayo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya
Madaxweynaha Uganda oo ku goodiyay in uu ciidamadiisa kala baxayo howlgalka AMISOM ee Soomaaliya
March 11, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dalka Uganada Yoweri Museveni. [Sawir Hore]
Kampala-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Uganada Yoweri Museveni ayaa ku goodiyay in uu ciidamadiisa kala baxayo Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) haddii Qaramada Midoobay ay ku adkeysato in la dhimo ciidamada ku jira howlgalka.
Goodinta ayaa imaanaysa kadib qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee sanadkii 2017, oo la qorsheeyay in ciidamada nabad ilaalinta ah ay si buuxda uga baxaan Soomaaliya sanadka 2020.
Uganda waa dalka ugu badan ee ku deeqay ciidamada iyada oo leh 6,400 askari oo katirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya oo gaaraya 21,626 askari.
Ciidamada AMISOM ayaa kasoo jeeda dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia, iyo Djibouti.
Sanadkii lasoo dhaafay, Midowga Afrika ayaa u jeediyay Burundi in ay dhinto ciidankeeda ku sugan Soomaaliya ilaa kun askari taasoo qeyb ka ah hanaanka ka bixitaanka AMISOM. Bunrundi ayaa diiday qorshahaas waxayna ku hanjabtay in ay gabi ahaanba la bixi doonto ciidankeeda katirsan AMISOM.
Sanadkii 2016, Kenya ayaa sidoo kale ku goodisay in ay ciidamadeeda kala bixi doonto Soomaaliya haddii Qaramada Midoobay aysan bixin dhaqaalaha lagu taageerayo howlgalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan dhismaha ciidamo milatari oo awood u leh in ay gacanta ku dhiga ammaanka dalka.
September 13, 2016 Shir-weynaha madaxda urur goboleedka IGAD oo Muqdisho ka furmay
Raysulwasaaraha Soomaaliya oo safar ku tagay Kismaayo
Madaxweynaha Puntland oo ku eedeeyay Somaliland in ay daandaansi milatari ka wado gobolka Sanaag
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmi doona dhiggiisa Kenya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay martiqaad uu u fidiyay dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyata in uu Nairobi booqasho ku tago. Martiqaadka ayaa waxaa u gudbiyay wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred [...]
Puntland iyo Somaliland oo is-dhaafsan doona maxaabiistii dagaalkii Tukaraq
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo Somaliland ayaa isku afgartay in is-dhaafsadaan maxaabiistii dagaalkii Tukaraq, sida ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ay sheegeen. Maxaabiis is-dhaafsiga oo ay fududeynayso haayada ICRC ayaa la filayaa in uu dhaco bisha soo [...]